China Six Axis စက်ရုပ်စီးရီးစက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | Daya
ခြောက်လဝင်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ50A-270 （100A270） 50KG
ခြောက်လဝင်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ06A-090 6KG
ခြောက်လှီးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ10A-160 10KG
ခြောက်လဝင်ရိုးစက်ရုပ်စီးရီး JZJ20A-180 20KG
၂။ ပြေးမြန်နှုန်းသည်မြန်။ ညှိနိုင်သည်။
၅။ ၎င်းသည်လေးလံသောအရာဝတ္ထုများဖြစ်သည့်ဆုပ်ကိုင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ မှောက်ခြင်း၊ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ပစ္စည်းများအားတပ်ဆင်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စက် တင်၍ ချစက်သည်လုပ်အားကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးလုံခြုံသောပစ္စည်းကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောအလုပ်ရုံ ၀ န်ထမ်းများ ၀ င ်၍ မ ၀ င်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများ၊ အထူးသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်းတွေ့ဆုံနိုင်သည်။
6. ပုံမှန်မဟုတ်သောလ်တာအမျိုးမျိုးဖြင့်စက်ရုပ်သည်အမျိုးမျိုးသောပုံစံကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ အော်ပရေတာသည်ဝန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူယူနိုင်သည်၊ ရွေ့လျားသည်၊ လှည့်သည်၊ ရှေ့သို့လွှဲ။ လှိမ့်နိုင်သည်။ ထိုအခါဝန်လျင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာကြိုတင်အနေအထားတွင်နေရာချခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူလူတစ် ဦး သည်လူအနည်းငယ်သာရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ခြောက် Axis စက်ရုပ်စီးရီးနည်းပညာဆိုင်ရာ Parameters
၁။ စက်ကိရိယာကို palletizing နှင့် handling လုပ်တဲ့နေရာမှာနေရာသိပ်မယူပဲဖောက်သည်အလုပ်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေပြီးသိုလှောင်ရုံပိုကြီးသည့်နေရာကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ စက်ရုပ်ကိုကျဉ်းမြောင်းသောနေရာတွင်ထိရောက်စွာနေရာချနိုင်သည်။
၂။ စက်ဘီးဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်သောစက်ရုပ်တွင်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အနည်းငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အပိုပစ္စည်းများသည်ပျက်ကွက်မှုနှုန်း၊ စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်၊
စက်ရုပ်၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်စက်ရုပ်နှင့်ကိုင်တွယ်မှုနည်းသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်စက်ရုပ်အားသယ်ဆောင်ရန်နှင့်သယ်ဆောင်ရန်စွမ်းရည်မှာ ၂၆ ကီလိုဝပ်နာရီခန့်ဖြစ်ပြီး၊ ဖောက်သည်များ၏လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုအကြီးအကျယ်လျှော့ချပါ။
4. လှည့်ပတ်စက်နှင့်ကိုင်တွယ်စက်ရုပ်သည်ခိုင်ခံ့သောသက်ဆိုင်မှုရှိသည်။ သုံးစွဲသူ၏ထုတ်ကုန်၏အရွယ်အစား၊ ပမာဏ၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့် pallet ၏အရွယ်အစားနှင့်အရွယ်အစားပြောင်းလဲသွားပါက touch screen ပေါ်ရှိအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖောက်သည်များ၏ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ palletizing နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ရုပ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသည်၊
၅။ palletizing နှင့်ကိုင်တွယ်သောစက်ရုပ်၏ထိန်းချုပ်မှုအားလုံးကို control cabinet ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လည်ပတ်နိုင်ပြီးအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
၆။ စမှတ်နှင့်နေရာချထားမှုအမှတ်ကိုသတ်မှတ်ထား သ၍ သင်ကြားရေးနည်းလမ်းကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။
Solid Frame တစ်ခုတည်းသော Crank စက်မှုစာနယ်ဇင်း (STD ...